Natopatopan'ny fandidiana, fandidiana Pack, fandidiana Drape - Akso
Azo antoka Adhesive kasety avy 3M.
Advanced fitaovana amin'ny Anti-voasakantsakan'ny, tantera-drano na hydrophilic & Low lint fananana.
Malefaka sy Fampiononana fahafahana.
Easy traceability ny singa rehetra ao amin'ny fonosana.
Omeo tandrify fiarovana sy ny fanaraha-maso nandritra rehetra aretina fandidiana.
azo antoka fampisehoana
Vita tamin'ny kalitao avo SMMS.
Nihaona AAMI 3 Rano Barrier Standard takiana ho an'ny fandidiana natopatopan'ny.
Nihaona fitsipika fanatanterahana BS EN 13795.
mahafeno ny fitsipika ho an'ny Flammability akanjo Textiles CPSC16, Taona faha-1, CFR Part 1610.
Low lint sy abrasion mahatohitra: mampihena ny mety ho lint aretina eo amin'ny ratra.
Adjustable neckline amin'ny vozony mena mamatotra - hook sy manome fitoerana.
MADIO sy fampiononana
Mipetaka seam voaisy tombo-kase dia midika ho tanteraka seam- manohitra ranon-javatra sy ny vovoka ingress.
Permeation notsapaina manohitra ny fototra isan-karazany ny zavatra simika.
Co-extruded lamba ny mazava, malefaka sy malefaka farany.
Elasticated tanteraka Hood, kitrokeliny sy ny hatotanany manome fampiononana sy fiarovana faran'izay betsaka.
EN1073-2 ho fiarovana manohitra vovoka poti izay mety ho voaloton'ny amin'ny radiations.
EN14126 ho fiarovana an'i niteraka loza sy infective mpiasa.
Nahazo fankatoavana araka ny EN1149 anti-voasakantsakan'ny fenitra.
fikatsahana ny kalitao tsara indrindra
Alice, mpanorina ny Akso fitsaboana, izay raibeny dia malaza dokotera sinoa. Efa nanampy olona maro amin'ny fahaiza-manao ara-pitsaboana. Avy tany am-boalohany mbola kely, Alice nianatra avy ny raibeny fa tsy maharitra ny asa fitsaboana tsirambina.
Alice niditra orinasa ara-pitsaboana rehefa nihalehibe, ka nahita Akso fitsaboana. Henjana, azo antoka, madio, ary efa niaraka fampiononana ny asany rehetra. Izany no fikatsahana Alice sy ny ekipany. Avy amin'ny famolavolana, mifidy akora ho ...
Akso fitsaboana specializes amin'ny fitsaboana disposables, akanjo fiarovana, ary nonwoven fanary vokatra, toy ny fandidiana draps, natopatopan'ny, fandidiana Packs, fanary coverall, mitokantokana rebareba, face saron-tava, kiraro fonony, sns
Teknika TUR rebareba
TUR fandidiana rebareba azo antoka PER ...
Miorena Amin'ny Teknika rebareba
Miorena Amin'ny rebareba fandidiana azo antoka fampisehoana ...
Cleaing fanary Lab Coats Multilayer Spunbon ...
Fanary laboratoara akanjo no be mpampiasa ho an'ny laborato ...
Fanary Isolation rebareba Size Universal Qty 50 ...
Ny fitokana-monina dia natopatopan'ny vita amin'ny avo -...
Safe, madio sy fampiononana, ireo no toetra ny fandidiana vokatra, ary
koa ny fikatsahana ny ekipa.
Foot Care lalotra , Kids fanary Coveralls , Beautiful natopatopan'ny Fa Kids , Kids White fanary Coveralls , Kids fanary Lab Coats , CP Health Care Cardiovascular Set-Up Pack ,